थाहा पाइराख्नुस् युरिक एसिड भएकाले के खाने, के नखाने ? | Rajmarga
यसरी युरिक एसिड बढेपछि सामान्यतः खुट्टाको बुढीऔँलाको छेउमा अचानक दुख्ने तथा सुन्निने समस्या हुन्छ । राति सुत्ने वेलामा सामान्य अवस्थामा रहेको मानिसको पनि बिहान उठ्दा नाटकीय रूपमा दुख्ने र सुन्निने भई खुट्टा टेक्न गाह्रो हुन्छ । जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ । युरिक एसिडका बिरामीले खानामा विशेष ख्याल पु¥याउनुपर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री :
काउली, ब्रोकाउली, कुरिलो र पालुंगोमा पनि युरिक एसिडको मात्रा बढी हुन्छ । तर, यस्ता तरकारी प्रयोग नै नगर्नेचाहिँ होइन । मात्रा मिलाएर हरियो तरकारी खाँदा हानि पुर्याउँदैन ।
Previous post: जयप्रकाश मल्लले बन्द गरेर भागेकाे अागम छेँ २५० वर्षपछि खुल्याे
Next post: उडुसले दिक्क बनायो ? यस्ता छन् उडुस भगाउने केही घरेलु विधिहरु